Help:Contents/Foto fi Qonqo Galchu - Wikipedia
Help:Contents/Foto fi Qonqo Galchu
Fakkii, Qonqo fi Video galchuu
Fakkii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Wa'ee mataa duree tokko yoo barresitanii, fakkii mataa duree suni wajiin walit-qabatee galchuun, dubistonni akka bayee hubatani fi akkasumas midhaginaa fuula sunitif bayee barbachisaa dha. Haa ta'u malee fakkiin atii galchituu kunii fakkii komputeraa, CD, Floppy disk kankee irraa galchittu miti, sunii dhisaa website biraa irra kopii gochuu hin dandesanii. Kunis waan Copyright violation ta'uuf, haa ta'uu malee fakkiin sunii yoo free license ta'ee duraan it galchuu qabduu. Haa ta'u malee ammaf fakkii commons wikipedia irratti argamuu qofaa akkam akka galchuu dandetanii isaan garsisaa, fakkii  irratti argaman hundaa fayyadamu ni dandettu. Yeroo bayee filii galchuun barbachisaa miti, maliif? yoo jetaan commons wikipedianu mataa duree gossaa bayeef fakii ta'ee qaba.
Fakkii Commons[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Beksisaa: yeroo kana gotaan fuula tokkotii commons wikipedia fi fuula biraa irratti bakka fakkii itti galchitani banuun garii dha.
Fuula commons wikipedia  irratti boksii search jedhutti jiraa (bita irratti) sunii kessatti fakkii malii akka barbadani ibsaa (kunii immo afaan oromon ta'uu qabu, ingliffa ta'uu qaba), ergaa xumurtani bodaa go kan jedhuu tuqaa. Fakkiin kunis jirachuu yokan jirachuu dhabuu danda'a, kunis sababa jechaa atii fayyadamtef ta'uu danda'a, kanaaf jechaa biraa wal-fakkatun yalli. Fakkenaa allabaa Oromo galchuuf Oromo jedhii katabii go tuqii, kunis waan Oromo adda adda fidaa. Haa ta'u malee kunii duraan barrefaman dhufaa, kanaaf barrefameen sunii fillachuu qabda. Fakkenaa kaa Oromo irratti Image:Et oromo.png kan jedhutti jiraa, sunii banuun immoo gara allaba Oromot isaan gessa, haa ta'u malee tokko tokkon banuu irraa salphatti Find media with Mayflower kan jedhuu tuqunii garii dha. Kunii immoo fakkii wa'ee Oromo commons wikimedia irratti argachuu dandettu hundaa si agarsisaa.
Achiin bodaa fakkii barbaduu filladhuu. Fakkenaa kana kessatti allabaa Oromo (dimaa adii gurachaa) filladha. Bakkii bayee xiyefachuu qabdan asii biraa, maliif? yoo jetaan nu kan kopii gochuu qabnu fakkii osoo hin ta'iin mataa duree fakkichati. Mataa dureen fakki kana Image:Et oromo.png dha. Jechaa kana gara barrefama kessanit kopii gochuun akka fakkiin suni achitti argamu tasisaa. Garuu jechii kopii gotaan jechaa Image: bodaa jiruu qofaa dha. Fakkena kanaaf Et oromo.png qofaa. Fakkii biraa kopii gochuufis hallumaa kanaan kopii gochuu ni dandettu.
Ergaa jechiicha kopii gotte bodaa, jechaa guttu filladhuu, Icon kessa (B, I, AB.... kessa) kan boksii ta'ee fakkii ofii kessa qabu, kan A fi xurumba jiduutii argamuu tuqii. Kuniis fakkiin sunii akka kanaan [[ ]] marfamuu tasisaa. Fakkenaa [[Image:Et oromo.png]]. Kan qofaa mitii jechaa sunii duratti Image:.. kan jedhuu daraa. Haa ta'uu malee wantii bekkuu qabdanii tokko yoo jiratee, kuniin fakkii bakka isaan barbadani isaan hin olka'u. Kanaafu mataa duree asiit annuu akka garii dubisaa...
Fakkii Midhagsuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Fakkii sunii bakka sirritti olka'uf kaneen asii gadii gochuu ni dandettu.
Yoo qabatanii tatee nu kan kopii gonee Et oromo.png qofaa, yoo garuu boksii fakkii (A fi xurumba jiddu jiruu) tuqxan ofiin jechaa Et oromo.png jedhuu gara Image:Et oromo.png jijjira. Kanaaf Image: bodaa kan jiruu qofaa kopii gochuun kan barbachiseef.
Kan Image:Et oromo.png... bodaa jiraan garuu nutii baressu qaba. Yoo hubatanii tatee ergaa waan tokko barresinee bodaa kana (|) jiddutti galchuu qabna.
Kanaaf jechaa Image:Et oromo.png... annee ergaa (|) galchinee bodaa, right kan jedhutti jiraa kunii immoo tessoo fakkii suni akka gara mirgaa ta'ee ibsaa.
Fakkenaa 1 - Fuula Oromo irratti fakiin gara mirgaa jiraa. Kana irratti rightiit tajajilame.
Hallumaa kanan bitaa gochuu yoo barbadne left galchinaa
Fakkenaa 2 - Fuula Ozone layer irrattti fakiin gara bitaa jira
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Contents/Foto_fi_Qonqo_Galchu&oldid=36631" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 10 Guraandhala 2021, sa'aa 14:46 irratti.